ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएमा पीडितलाई एक करोड क्षतिपूर्ति
३१ भदौ, काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर बिस्फोट भएर दुर्घटनामा परी पीडित हुने उपभोक्ताले अबदेखि बिमामार्फत एक करोड रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् । एलपी ग्यास उद्योग संघले भदौ
‘संविधान संशोधनका नाममा एमाले फुटाउने षड्यन्त्र’:ओली
२६ भदौ, काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुईतिहाइ मत पुर्‍याउन आफ्नो पार्टी फुटाउने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा
भारतसँग नयाँ सम्झौता हुँदैनन्ः प्रधानमन्त्री
२३ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणमा कुनै नयाँ सम्झौता नहुने बरु विगतमा भएका सहमति समझौताको कार्यान्वयनमा नेपालको जोड दिने बताएका छन् । भारत भ्रमणबारे पूर्वपररष्ट्रमन्त्री र कूटनीतिकज्ञहरुसँग
काँग्रेस र माओवादीका धेरै नेता बेरोजगार
काठमाण्डु, २२ भदौ– कांग्रेसमा १२औँ महाधिवेशनपछि पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय कार्यसमिति ८५ सदस्यीय थियो । तर, सुशील कोइरालाको पाँचवर्षे कार्यकालमा पदाधिकारीबाहेक अरूले काम पाएनन् । विधानमा व्यवस्था भएका विभाग गठन गरे पनि
२१ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा प्रेस पासका आधारमा पत्रकारलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । सूचना विभागको कार्ड देखाएर प्रवेश पाइने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल
काठमाडौं – संगीतकारका रुपमा भन्दा बढी गायकका रुपमा चिनिने चेतन सापकोटाको गायकीलाई धेरैले भारत पलायन भएका गायक उदीतनारायण झासँग तुलना गर्छन् । उदीतकै झल्को दिने गरी गीत गाउने सापकोटाले मायाप्रितिका
नेविसंघको महाधिवेशनमा काँग्रेसले सक्यो ५ करोड
काठमाडौँ, ७ भदौ– काँग्रेसको सबैभन्दा ठूलो भ्रातृसंस्था नेपाल विद्यार्थी संघको ११ औं महाधिवेशन गर्न चार करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । तीन हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधीका लागि १२
माओवादीकै कारण पेट्रोलको हाहाकार भएको विशेष खुलासा !
काठमाण्डु, ७ भदौ– बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको किन हाकाकार ? यो प्रश्न अहिले सर्वत्र उब्जिएको छ । आधिकारिक निकायले केही दिन बिदा परेकाले पेट्रोलियम पदार्थ प्रयाप्त आउन नसकेको र नेपालमा त्यसको
दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पुनःचर्किने
दार्जिलिङ, ७ भदौ– भारत पश्चिम बंगालको दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमनिस्ट्रेसनको नेतृत्व गरिरहेको दल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनका लागि तयार रहन सर्वसाधारणलाई आह्वान गरेपछि दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन
१० मुख्य भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर स्क्यानर एक्सरे मेसिन राख्ने
३ भदौ, काठमाडौं । भन्सार विभागले चीन सरकाको सहयोगमा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी व्यापार हुने १० मुख्य भन्सार कार्यालयमा कन्टेनर स्क्यानर एक्सरे मेसिन राख्ने तयारी गरेको छ । भन्सार जाँचपासलाई छिटोछरितो
नेपाली चेलीको हातबाट बाधे मोदीले राखी
काठमाडौं, ३ भदौ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित साह, गृहमन्त्री राजनाथ सिंहलगायतले बिहीबार बिहान नेपाली चेलीको हातबाट राखी लगाएका छन्। आइटिओस्थित भारतीय जनता पार्टीको नयाँ भवन शुभारम्भ
लकडाउन अवधि बढाउने तयारी
काठमाडौं – सरकारले लकडाउनको समयावधी बढाउने तयारी गरेको छ । एक साताका लागि लगाइएको लकडाउनको